Nhau - Kunzwisisa Munyu Spray Ngura Kwayedza
Ngura ndiko kuparadza kana kuora kwe zvishandiso kana zvivakwa zvavo zvinokonzerwa nenzvimbo.
1.Kakawanda ngura inoitika nekuda kweakasarudzika maitiro mukati mamiriro ekunze. Iyo mhepo inoumbwa nezvinhu zvinokanganisa uye zvinokanganisa zvakadai seoksijeni, mwando, shanduko yetembiricha uye zvinosvibisa.
Iyo nzira yemunyu yekutsvaira ngura nzira yakasarudzika uye inoshandiswa zvakanyanya mumaindasitiri akasiyana siyana. Mushonga wemunyu wakataurwa pano unoreva mamiriro ekugadzira echloride. Chinhu chayo chikuru chinokanganisa chloride munyu senge iyo inowanikwa mune sodium chloride, iyo inouya ichibva mugungwa uye mukati menyika saline-alkali nzvimbo.
Iyo ngura inoitika pamusoro pesimbi pamusoro ndeye mhedzisiro yemagetsi emakemikari pakati pekloride ion iri mune yakasara oxide pane yesimbi pamusoro uye dziviriro uye simbi yemukati. Panguva imwecheteyo, ma-chloride ions ane huwandu hwesimba remvura, iyo inogona kunwiswa nyore nyore neiyo pores uye kutsemuka pane yesimbi pamusoro kuti ibvise uye / kana kutsiva okisijeni iri mune yakasanganiswa nekiriniki, ichichinja isina oxide yakasanganiswa kuita yakasviba machloride, uye kushandura iyo passivated pamusoro kuita inoshanda nzvimbo. Chinangwa chemuyedzo uyu ndechekuti unzwisise kuti chigadzirwa pachacho chinokwanisa kumira zvakadii kuita kwakashata panguva yekushandisa kwese.
2. Munyu pfapfaidzo ngura bvunzo uye ayo chaiwo-epasi zvinoshandiswa
Munyu pfapfaidzo bvunzo muyedzo wezvemamiriro ekunze unonyanya kushandisa zvakaumbirwa zvakaenzanisirwa munyu kupora mamiriro ezvakatipoteredza kuti uongorore kurwisa kwekuora kwezvigadzirwa kana simbi zvinhu.
Iyo yakakamurwa muzvikamu zviviri; imwe ndiyo yakasarudzika nharaunda yekuratidzwa bvunzo, uye imwe ndiyo inomhanyisa yakaenzanisirwa munyu pfapfaidzo nharaunda bvunzo. Iyo yekunyepedzera simulated munyu pfapfaidzo nharaunda bvunzo inoshandisa munyu pfapfaidzo kuyedza kamuri kuongorora kugona kwechigadzirwa kurwisa ngura.
Zvichienzaniswa nezvivakwa zvinowanzo kuwanikwa munzvimbo yepanyama, iyo chloride yevasungwa yemunyu spray inogona kuve yakati wandei kana kaviri kumusoro. Izvi zvinowedzera zvakanyanya mwero wekuora. Semuenzaniso, kana chigadzirwa chemuyenzaniso chikaedzwa munzvimbo yakasikwa yekuratidzira, zvinogona kutora kusvika gore kuti dzikunde, nepo zvakagadzirwa nenzira zvinogona kuburitsa mhedzisiro yakafanana mumaawa makumi maviri nemana chete.
Iyo yekunyepedzera simiti yemunyu bvunzo inosanganisira yekusarerekera munyu pfapfaidzo bvunzo, iyo acetic acid munyu pfapfaidzo bvunzo, mhangura munyu yakakurumidza acetic acid munyu pfapfaidzo bvunzo, uye imwe yekusiyanisa munyu pfapfaidzo bvunzo.
A. Iyo isina kwazvakarerekera munyu pfapfaidzo bvunzo (NSS bvunzo) ndeimwe yedzakare nzira dzekumhanyisa kuita ngura uye inonakidzwa nehupamhi hwekushandisa munda. Iyo inoshandisa 5% sodium chloride munyu aqueous solution, ine pH kukosha yakagadziridzwa kune yekusarerekera renji (6-7). Iyo tembiricha yekuyedza iri 35 ℃, uye mwero wekunyorovesa wemunyu wekusasa unofanirwa kunge uri pakati pe1 ～ 2ml / 80cm².h.
B. Iyo acetic acid munyu pfapfaidzo bvunzo (ASS bvunzo) inogadzirwa zvichibva pane kwazvakarerekera munyu pfapfaidzo bvunzo. Inowedzera imwe glacial acetic acid kune 5% sodium chloride solution yekudzikisa pH kukosha kwesarudzo kune angangoita 3. Mukuita kudaro mhinduro inova acidic, uye mhute yemunyu iyo yakaumba inoshanduka kubva kune kwazvakarerekera munyu mhute kuita asidhi. Yaro ngura mwero iri kanokwana katatu kukurumidza kupfuura iyo NSS bvunzo.
C. Iyo yemhangura munyu yakakurumidza acetic acid munyu kupora bvunzo (CASS bvunzo) inokurumidza munyu pfapfaidzo ngura bvunzo ichangobva kugadzirwa mhiri kwemakungwa. Iyo tembiricha yekuyedza ndeye 50 ℃. Chishoma chemhangura munyu, mhangura chloride inowedzerwa kune mhinduro yemunyu kuti iite zvine simba kuita ngura. Chiyero chayo chengura chakada kuita ka8 iyo yeNSS bvunzo.
D. Iyo yekutsinhana yemunyu pfapfaidzo bvunzo ndeyakazara yemunyu pfapfaidzo ongororo. Iyo inoumbwa neyakarerekera munyu pfapfaidzo bvunzo mune yemunyu pfapira ngura bvunzo kamuri pamwe nekungogara kunyorova kupisa bvunzo. Inonyanya kushandiswa kune-mhango-mhando zvigadzirwa zvizere. Nekuda kwenzvimbo nyoro inogadzirwa mukati mese bvunzo, munyu wemushonga unokwanisa kupinda nepakati pevhu kusvika munzvimbo dzakadzika dzechigadzirwa. Chinangwa chekuchinjisa nharaunda mbiri dzekuyedza (munyu uye kupisa uye kunyorova kupisa) kusimudzira kurongeka kwekuti munhu anogona kutonga magetsi nemagetsi echinhu chero chipi zvacho chakapihwa.
Yedu yemunyu pfapfaidzo bvunzo yakavakirwa pane iyo GJB548B standard, nzira 1009, uye ayo akakosha zvivakwa ndeaya: kusungwa kwemunyu mhinduro inofanira kunge iri 0.5% ~ 3.0% (muzana nehuremu) yemvura yakasviba kana yakadonhedzwa mvura. Munyu unoshandiswa unofanirwa kuve sodium chloride. Kana uchiyera pa (35 ± 3) ℃, iyo pH kukosha kwemunyu mhinduro inofanira kunge iri pakati pe6.5 na7.2. Chete kemikari yakachena hydrochloric acid kana sodium hydroxide (yakasanganiswa mhinduro) ndiyo inogona kushandiswa kugadzirisa iyo pH. Kufananidza nzira yekumhanyisa ngura yenzvimbo yemvura yegungwa, kureba kwenguva yayo yekumisikidza kunoitisa kugona kwayo kurwisa ngura.
Nekuvandudzwa kwe revatema redunhu simbi mapakeji, inoenderana inoenderana nezvakatipoteredza mamiriro ekuongorora akawedzera uye akajeka. Iyo yemunyu pfapfaidzo ngura bvunzo ndiyo huru nzira yekuongorora yekukora ngura kuramba kwezvigadzirwa. Naizvozvo, kugadzirisa kunopisa kusagadzikana kwesimbi yekupakata chave chinhu chakakosha chegadziriro yekugadzira. Kubudikidza nehunyanzvi hwekutsvagisa, kambani yedu inovavarira kugadzirisa nyaya yehurosi kuburikidza nehurongwa hwekurapa kupisa, kupisa kwekuisa chisimbiso maitiro, kuita electroplating maitiro uye dzimwe nzira dzekugadzirisa zvigadzirwa zvesimbi. Nenzira iyi isu tinokwanisa kunyatso kugadzirisa kurwisa kwese kwese kwesimbi pasuru uye kusangana nezvinodiwa zvevatengi zvinoshandiswa kune aya marudzi ezvigadzirwa.